धरानमा पहिलोपटक प्ला’ज्मा थे’रापी गरेका कोरोना संक्रमितको मृ’त्यु
Homeराष्ट्रिय खबरधरानमा पहिलोपटक प्ला’ज्मा थे’रापी गरेका कोरोना संक्रमितको मृ’त्यु
धरान : बीपी कोइराला स्वास्थय विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा पहिलोपटक प्ला’ज्मा थे’रापी गरिएका ६८ वर्षीय पुरुषको नि’धन भएको छ। धरान उपमहानगरपालिका ८ घर भएका उनको आइतबार कोभिड अस्पतालमा उपचारका क्रममा नि’धन भएको बीपी प्रतिष्ठानका मे’डिसिन विभाग प्रमुख डा. संजिवकुमार शर्माले बताएका छन्। आइतबार दोस्रोपटक पुनः प्ला’ज्मा थे’रापीको तयारी गर्दै गर्दा उनको नि’धन भएको हो। पन्ध्र दिन अगाडि फोक्सोमा इ’न्फेक्सन भएपछि अस्पताल भर्ना भएका पुरुषको कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो।
ट्रा’भल हि’स्ट्री नै नभएका मृ’तकलाई कहाँबाट कोरोना संक्रमण भयो भन्ने पत्ता नलागेर क’न्ट्रयाक ट्रे’सिङ गर्न सकिएको छैन। धरानमा समाजिक व्यक्तिको छ’वी बनाएका उनको नि’धनले सिंगो धरान शो’कमा डु’बेको छ। धरानमा लामो समयदेखि हा’ड्यवयर व्यपार संचालन गरिरहेका मृ’तकका श्रीमती, एक छोरा र दुई छोरी छन्। उनको हरियाली सामुदायिक वन क्षेत्रमा दा’हसंस्कार गर्ने तयारी भैरहेको धरानका मेयर तिलक राईले बताए। शनिबार बीपी प्रतिष्ठानमै दो’स्रो प्ला’ज्मा थे’रापी गरिएका अर्का पुरुषको पनि नि’धन भएको थियो।
धरानमा कोरोनाका कारण मृ’त्यु हुनेको संख्या तीन पुगेको छ। सुनसरीमा कोरोना संक्रमितको संख्या ४ सय ४१ पुगेको छ। जसमध्ये एकसय ९० जना नि’को भएर घर फर्किएको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फ’डिन्द्रमणि पोखरेलले बताए। सुनसरीको संक्रमितको संख्या दैनिक वृद्धि भएको र मृ’तकको संख्या चार पुगेपछि सुनसरीमा भदौ १४ गतेसम्म पसल खोल्न, हिंडडुल गर्न र यातायातका साधन संचालन गर्न प्र’तिबनध लगाइएको छ। सुनसरीका १२ वटै स्थानीय निकाय नि’षेधित क्षेत्र घो’षणा गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताए। अन्नपुर्ण पोस्ट
दक्षिणकाली माताले सबैको कल्याण गरुँन ! – हेर्नुहोस् भदौ ८ गते सोमबारको राशिफल
चितामा चढाएपछि शवकाे कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ आयो, चार सय मलामी तनावमा